Myanmar International Development Co., Ltd. |
M I D Construction isaMyanmar local engineering company approved by Myanmar government. The business scope of M I …
M I D undertakes to buildaresponsible international image, through its promotion of sustainable development around the globe, and …
Myanmar International Development Co., Ltd. originally established as NanTaw Car Rental Service in 2009. It started operations by car rental …
We offer specialist Industrial Electrical Drafting and Engineering Services with exceptional skills and expertise in the area of Industrial Electrical …
မြစ်ကြီးနားနည်းပညာတက္ကသိုလ် မှ တင်ဒါ ခေါ်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သော နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မြစ်ကြီးနား) တွင် (၃) ထပ်စာသင်ဆောင် ( ၁၉၂’ x ၃၈’ x ၃၆’ ) RC ( ၁ ) …
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ M I D Co., Ltd. တို့သည် ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဗန်းမော်မြို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနခရိုင်ရုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း…
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် M I D Co., Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်သော မိုးမောက်မြို့နယ် မီးသတ်စခန်း (၆၅×၅၂×၂၆)ပေ အာရ်စီနှစ်ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။…
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ( M I D Co., Ltd. ) မှ ဗန်းမော်ပြည်သူ့ဆေးရုံ( ၂ )ထပ် တိုးချဲ့လူနာဆောင် (၁၅ဝပေ x …
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်း ၁၁ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ ၀.၄ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ထရန်စဖော်များတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ၂၈ရက်၊ မတ်လ၊ ၂၀၁ရခုနှစ် တွင် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း တည်ဆောက်မှုပြီးစီခဲ့သည်။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းမှ မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ …
မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများတွင် ဓာတ်အားလိုင်း တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ထရန်စဖော်မာ တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ…
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာန မှ မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ ( M I D Co., Ltd. ) မှ ဗန်းမော်ပြည်သူ့ဆေးရုံ …